Shina 16 Oz Clear Glass savony Dispenser miaraka amin'ny orinasa voatondraka Nick nopotehina ary mpanome | Hoyer
16 Dispenser savony amin'ny tavoahangy vera miaraka amin'ny baomba Nickel nopotehina
Ny famolavolana maoderina - tavoahangy kristaly, tampoka tsy mipetaka tsara tarehy, tsara tarehy sy tsara tarehy, miaraka aminy hanaingoana ihany koa, taratry ny tsirony tokana. Azo hapetina eo amin'ny lampihazo fandroana, fandroana an-dakozia, efitrano fidiovana, trano fambolena, na ety ivelany toa ny tora-pasika. Versatile - mety amin'ny fampiasa isan'andro isan'andro, toy ny manadio, mpanadio, shampoo, fanasana vatana, vava, lotion, menaka ilaina, menaka mando, na dia saosy amin'ny lakozia aza.
Volume: 475ml / 16 oz
Haavo: 125mm / 4.9 santimetatra
savaivony: 79mm / 3 santimetatra
304 voatavo vyTOP-kalitao tsara indrindra hitazonana ny molotra metaly maharitra, tsy mora ny hara, rehefa avy ny fanandramana dia azo tsindry in-10000 mahery. Ny velaran-borosy volafotsy dia manakana ny rantsan-tanana tsy mijanona.
Fitaovana mari-pahaizana ho an'ny sakafo ara-tsakafo - fitaratra tsy misy firaka sy fantsona BPA maimaim-poana, famenoana azo antoka ny karazan-jiro isan-karazany amin'ny alàlan'ny rano amin'ny fampiasana isan'andro. Azo averina, azo averina sy mahazo aina ary haitao.
Serivisy varotra aorian'ny 100% - raha tsy tanterahina araka ny antenaina ny dispenser savony dia azafady mba hifandraisa aminay avy hatrany, hanome vahaolana tsara dia tsara ho anao izahay. Mahafinaritra be koa ny hevitra!
Ny tetika vita amin'ny groove, indrindra fa ny tara-masoandro na ny hazavana. Fahitana ambony, fiarovana tsy fanenjehana amin'ny rano, fahitana amin'ny rano, tombo-kase tsara, fanoherana tsara ny tsindry.
Ny fanambanin'ny tavoahangy
Ny foto-kevitry ny famolavolana anay dia fomba vaovao sy kanto, tsotra sy kanto, lamaody voajanahary, mamiratra ao ambanin'ny hazavana. Ny farany ambany dia manana endrika famoronana skid-porofo, na dia ny endrika ivelany dia mahafinaritra sy mahafinaritra.
Kalitao tsara, fikojakojana maharitra ny molotra metaly, tsy mora ny harafesina, rehefa avy ny fanandramana dia azo terena mihoatra ny 10.000. Aariho ny ambiny amin'ny fanamboaran-tànana.
Size Boky: 475ml Haavony: 125 mm
Boky: 16 oz H: 4.9 santimetatra
D: 3.1 santimetatra
Sample a. santionany amin'ny tahiry:QTY: 1–5 pcs
Previous: 16oz Glass savony Dispenser miaraka amin'ny Silicone Funnel
Manaraka: Soapesaka fitaratra vita amin'ny vera vy vy